Global Voices teny Malagasy » Ho Avy Tsy Ho Ela Ao Etazonia ny Fanairana Amin’ny Smartfinday Rehefa Misy Fandraofana Mpifindramonina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 13 Marsa 2017 4:47 GMT 1	 · Mpanoratra Public Radio International Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Amerika Avaratra, Etazonia, Fifindràmonina, Mediam-bahoaka, Teknolojia
‘RedadAlertas’, fampiharana milaza aminao ny toerana misy ny bemidina anenjehana mpifindramonina. Loharano: Nampindramin'ny Conexión Migrante
Ity tantara avy amin'i David Leveille  ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org  tamin'ny 28 Febroary 2017. Navoaka eto indray izany noho ny fifanaraham-piarahamiasa eo amin'ny PRI sy Global Voices.
No abra la puerta! Aza vohaina ny varavarana!
Ity angamba no sombina torohevitra laharana voalohany atolotr'ireo mpikatroka ho an'ireo mpifindramonina tsy manana taratasy miisa 11 tapitrisa monina ao Etazonia, izay maro amin'izy ireo no matahotra ny ho vaoroaka. Raha tonga mandondòna ao aminao tsy misy taratasy ara-dalàna [didim-pitsarana] ny polisy, dia manan-jo  tsy hamoha varavarana ny mponina ao Etazonia.
Azo antoka fa hanampy ihany koa ny fampilazana mialoha mikasika ny fidinan'ny mpiasan'ny fifindramonina eny amin'ny toeram-piasana.
Misy ankehitriny ny fampiharana momba izany, natokana ho an'ireo mpifindramonina tsy manana taratasy miteny Espaniola. Antsoina hoe “RedadAlertas” — na “FanairanaBemidina” izany’.
“Eny, mbola tsy mandeha izany, fa eo an-dalam-pandrafetana”, hoy ilay mpandrafitra rindrambaiko monina ao Celso Mireles. “Saingy amin'ny fomba fiasany, amin'izao fotoana izao, dia tianay ny olona ho afaka misoratra anarana hahazoany fanairana bemidina misy eny akaikin'izy ireo ary misy vondron’ olona hafa hisahana ny fitaterana sy fanamarinana ny fisian'ireo fanairana.”
Mpikambana ao amin'ny ekipa mpandrindra ny loharanom-baovao misokatra (open-source) i Mireles, sady mpikatroka teknolojika no mpirotsaka an-tsitrapo namorona ny fampiharana crowdsourcing (asa ifarimbonan'ny daholobe).
Teraka avy amin'ny adihevitra nandritra ny taona maromaro teo amin’ ireo olona nirotsaka amin'ny fiarovana ny zon'ny mpifindramonina ny tetikasa RedadAlertas. “Nivory nandinika momba ny fahafahan'ny teknolojia hanampy ny fiarahamonina tsy manana taratasy izahay ary iray amin'ireo hevitra nivoaka tamin'ny resadresaka ity tetikasa ity,” hoy i Mireles.
Mifantoka amin'ny famantarana ireo toeram-pisavana ny fifindramonina sy ny bemidina mety hisy eny amin'ny toeram-piasana ny fampiharana. Maminavina i Mireles fa mety hitranga matetika kokoa ity karazana bemidina ity.
Mangataka fitadiavana mpiasa manampahefana fanampiny miisa 10.000  hisahana ny fifindramonina ny didim-panjakana navoakan'ny filoha Donald Trump tamin'ny volana Janoary. Fara fahakeliny, tetikasa iray an'ny Trano Fotsy, azon'ny Associated Press ary navoakany ampahibemaso  no nampiseho fa mihevitra hanaparitaka andiana Mpiambina Nasionaly miisa 100.000 ny Departemantan'ny Fiarovana ny Tanindrazana (Minisiteran'ny Atitany) hisambotra ireo mpifindramonina an-tapitrisany tsy manana taratasy ao amin'ny firenena Amerikana miisa 11. (Nolavin'ny Trano Fotsy  izany tatitra izany.) Izany karazana paikady izany dia azo antoka fa ahitana bemidina eny amin'ny toeram-piasana tahaka ny orinasa sy ny toeram-pambolena mampiasa mpifindramonina, ary ny toerana maro misy fihaonan'ireo mpiasa isan'andro. Mety ho tafiditra amin'izany ihany koa ny sakan-dalàna itakiana amin'ireo saofera ny ampisehoana taratasy fahazoan-dalana hitondra fiara sy ny taratasy famantarana azy ireo mba ahafahany manohy ny lalana. Mihevitra i Mireles fa mety hitarika amin'ny fanaovana “bemidina miafina amin'ny alalan'ny fandehanana an-tongotra eny amin'ny faritra manodidina ” ireo mpiasan'ny fifindramonina.
“Tsy mbola nisy tahaka izany ankehitriny, saingy mino aho fa marobe ireo zavatra tsy mbola fahita mety hiseho”, hoy izy. “Ka fiomanana tanteraka amin'ny firongatry ny fampahoriana ireo mpifindra monina tsy manana taratasy ao Etazonia izany”.
Tsy midika akory izany fa mampatahotra olona i Mireles. Tiany mba haneho ny mifanohitra amin'izany ny torohay ao amin'ny fampiharana. Ohatra, tsy hampandre fisamboran'olona any amin'ny tranon'olo-tsotra izy io, ohatra, rehefa tonga eo amin'ny tokonam-baravarana ny mpiasan'ny fifindramonina. Tsy ilaina izany, hoy izy “fa vao mainka mampitombo ny tahotra eo amin'ny fiarahamonina izay ezahin’ ity fampiharana ity hamaivanina”.
Mety misy ihany koa ny olana ara-pitsarana miseho amin'ny famolavolana fitaovana rindrambaiko izay ahafahan'ireo mpifindramonina tsy manana taratasy hitsoaka ny lalàna na hanakana ny ezaka fampiharan-dalàna. Saingy hatramin'izao, hoy i Mireles, mbola tsy naharay fitoriana ireo mpandrafitra rindrambaiko (developera).
“Tsy nisy olona nifandray tamiko tao amin'ny ICE [Polisin'ny Fifindramonina sy ny Fadintseranana] ary misy ireo mpisolovava an-tsitrapo mandray anjara amin'izao fotoana izao, izay manana traikefa ara-pitsarana eo amin'ny resaka momba ny fiainana an-takonana sy izay mifanaraka amin'ny lalàna, mino aho fa manana fiarovana eo amin'ny lafiny lalàna isika”, hoy izy.
Efa dondona sahady ireo mpiserasera hitroka ny fampiharana, hoy i Mireles. Misy ireo manoro hevitra fa tokony ho hita amin'ny teny maro hafa ny fanairana bemidina fa tsy amin'ny teny Espaniola ihany, mba ho azo ampiasan'ny mpifindramonina araka izay betsaka indrindra. Eo amin'ny 13 isan-jaton'ny mpifindramonina tsy manan-taratasy no avy amin'ny firenena Aziatika , araka ny tombatombana avy amimn'ny Ivon-toeran'ny Politika Fifindramonina. Manasa ireo mpandika teny an-tsitrapo ny RedadAlertas mba hanampy hanitatra ny fidirana amin'ny fampiharana . Rindrambaiko malalaka ihany koa izany.
“Mandroso haingana dia haingana ny teknolojia, ary liana amin'ny fitondrana izany karazan-kery izany ho amin'ny hetsika zon'ny mpifindramonina aho. Mandre zavatra maro izahay tahaka ny hoe, ‘Eny, fantatrao, fa tsy mazoto hampiasa teknolojia ny mpifindramonina tsy manana taratasy’, sy ny hoe, ‘Tokony handinika ny fidirana amin'izany (teknolojia izany) isika’. Na dia marina amin'ny ampahany ihany aza izany, misy ihany koa ny fikarohana mampiseho ohatra fa ny tsena Latinô no anisany voalohany nandray azy indrindra”, hoy izy.
“Mazava ho azy, efa nahita isika fa mampiasa teknolojia tahaka ny stingray ny polisy tsy hampandeha ny fifaindraisana mandritra ny fihetsiketsehana milamina”, hoy i Mireles. Saingy zatra miatrika izany ny mpikatroka.“Mino aho fa miezaka ny hahafantatra ny fisian'izany isika amin'ny maha mpandrafitra rindrambaiko ary miezaka hanangana fitaovana tsy mampidi-doza fa tsy mionona fotsiny amin'ny famoronana mety hampaka fanahy ny governemanta hiditra an-tsokosoko ao anatin'izany”.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/03/13/96459/
 Mangataka fitadiavana mpiasa manampahefana fanampiny : https://www.pri.org/stories/2017-02-10/19-realdonaldtrump-you-plan-hire-10000-more-immigration-officers-are-you-also
 azon'ny Associated Press ary navoakany ampahibemaso: http://hosted.ap.org/dynamic/stories/U/US_TRUMP_NATIONAL_GUARD?SITE=AP&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT
 Nolavin'ny Trano Fotsy: http://www.latimes.com/politics/washington/la-na-essential-washington-updates-white-house-denies-report-that-trump-is-1487348685-htmlstory.html
 Eo amin'ny 13 isan-jaton'ny mpifindramonina tsy manan-taratasy no avy amin'ny firenena Aziatika: http://www.migrationpolicy.org/data/unauthorized-immigrant-population/state/US
 Manasa ireo mpandika teny an-tsitrapo ny RedadAlertas mba hanampy hanitatra ny fidirana amin'ny fampiharana: https://github.com/Cosecha/redadalertas/wiki/FAQ
 stingray : http://www.citylab.com/crime/2017/02/cellphone-spy-tools-have-flooded-local-police-departments/512543/